Ahoana no fomba ahafahako mamorona rindran-damina tsara amin'ny fametrahana tetikady SEO amin'ny tranokalako?
Tsara, tena ilaina tokoa ny mamorona rindran-kira mahazatra eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny SEO mba hahazoana ny toerana handresena ary hijanona amin'ny fifaninanana. Raha ny tena marina, ny orinasanao dia antenaina ho hita eo amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana (SERPs an'ny Google). Izany no antony ilàn'ny tranonkalanao azy ireo mba hiara-dalana - ny kalitao ary ny tetikady SEO amin'ny ankapobeny. Soa ihany fa nahazo fahitana kely aho, ary nisy fiheverana marim-pototra maromaro nipoitra avy amin'ireo seo SEO manam-pahaizana manokana efa zatra nandritra ny roa volana lasa izay. Eto izy ireo!
Mifantoka amin'ny fahasamihafana
Ny hevitra manan-danja amin'ny backlinks momba ny kalitaon'ny fahombiazan'ny SEO dia ny mamorona portfolio. Midika fa ny zavatra rehetra dia tokony hojerena araka ny tokony ho izy - ny andriam-pejinanao dia tokony hijery araka ny endriny sy azo itokiana araka izay azo atao mba hanomezana valim-pifidianana tsara indrindra amin'ny Google. Ny tsara indrindra, ny mombamomba ny backlink dia mifototra amin'ireo dom-piarahamonina ambony indrindra (dot EDU ao anaty tranokala, vaovao ambony sy pejin'ny haino aman-jery, blaogy viral, loharano B2B, sns.), ho an'ny pejy mifandraika amin'ny sehatra indostrialy, finday, ary tranonkalan'ny GOV.
Ny hany fomba iray ahafahana mankafy fampivoarana tsara eo amin'ny backlinks sy ny paikady SEO dia ny mitazona ny vokatra. Raha ny fahitanao azy, raha mifandray amin'ny elektronika na ny fitaovana elektronika ny tranokala, dia tsy mampifandray ny pejy amin'ny tranonkala na ny lahatahiry, ohatra momba ny fitsaboana na ny serivisy. Eny, indraindray dia maro ny loharanom-baovao tsy dia mahaliana loatra no afaka mijery tsara ny pejy avoakany, izay mety ho hita any amin'ny toerana manodidina ny 80 isa. Kanefa ny fitazonana ny maha-zava-dehibe dia TSY MISY zavatra mety hitranga. Raha tsy izany, ny mpilalao horonantsary dia mety hiteny amin'ireo tsy dia mifangaro amin'ny ankapobeny mahavariana ho an'ny ezaka tsy mety ataon-dry zareo hialana amin'ny lalao.
Saingy mbola afaka miatrika ny olana atrehana. Mba hahazoana raki-peo mifandraika kokoa amin'ny adiresy SEO izay manohana ny tetik'ady SEO amin'ny tranonkalanao, manoro hevitra aho hampifandraisina amin'ireo blaogy mendri-pitokisana sy azo itokisana, izay manodina ny lohahevitra malaza ao amin'ny orinasa misy anao. Amin'izany, avelao ity rohy ity hanondro ny pejy fanentanana anao ao amin'ny tranokala izay mety hanome vahaolana, valiny, soso-kevitra, na farafaharatsiny ny fiheverana akaiky. Azonao atao koa ny mampiasa andiam-teny samihafa amin'ny teny maro mba hanomezana lanja bebe kokoa ny backlinks anao. Midika izany fa azonao atao ny manisy azy ireny amin'ny endriny voalohany (fohy), ary endrika lava be. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny fehezan-teny feno fitenenana feno. Ataovy azo antoka fa ny tenimiafina misy ny rakitrao dia mivantana mivantana avy amin'ny tranonkalanao, ary koa ny sisa amin'ny votoatin'ny fitrandrahana.
Mitadiava tsara kokoa
Mazava ho azy, ny karazana endri-tsoratra farany tsara indrindra dia hofaritana amin'ny tanjona voalohan'ny tranonkalanao. Mariho anefa fa tsy ny ankamaroan'ny vatofantsika rehetra no hanao, mazava ho azy, raha tsy hoe hendry ianao raha hanamboatra pejy fanentanana lavitra. Ny tiako holazaina dia tsara kokoa ny manodina ny pejy fandraisana an-dalamby ao amin'ny tranokala misy anao, mba hiantsoana mpitsidika anao hanao hetsika manokana, toy ny fanaovana fametram-po, famenoana endrika, famoahana votoaty sarobidy, na fanapahan-kevitra avy hatrany mividy miaraka aminao. Eo am-pamaranana, eto dia misy ny fiheverana ankapobeny momba ireo lahatsoratra fanamarihana izay manome soso-kevitra ireto karazana manaraka ireto: mifanaraka tsara, marika voatendry, endrika génieux, andian-teny, ary LSI Source .